व्यापार ब्याकलिङ्क के हो र तपाईको साइटमा उनीहरूले के गर्न सक्नेछन्?
आजको अनलाइन संसारमा, व्यापार ब्याकलिङ्कहरूले सम्मानित पक्ष-ब्रोयरहरूको रूपमा सेवा गर्छन्. तिनीहरू अनलाइन व्यापार प्रमोशन योगदान गर्छन् र इन्जिनहरू खोज्नका लागी एक वेबसाइट बनाउँछन्. कुनै पनि खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन अभियान लिंक इमारत बिना.
आउनुहोस् हाम्रो अवस्थाको लागि अधिक सामान्य कल्पना गरौं. तपाईं पट्टीमा बसिरहेका छौं र कसैलाई तपाईंको बारेमा कुरा गरिरहेको छ सुन्नुहोस् - scivolo in piscina. यदि यो स्पीकर सम्मानित छ र तपाईंलाई सकारात्मक लाइटमा वर्णन गर्दछ भने, यसले तपाईंलाई राम्ररी बुझाउँछ र तपाईलाई प्रतिष्ठा र अधिकार दिन्छ. मानिसहरूले यो जानकारी सुनेका छन् तपाईंको बारेमा राम्रो सोचाइ. र यसको विपरीत, यदि एक व्यक्ति स्केच हुन्छ, मान्छे उनको साथ सम्पर्क गर्न इन्कार गर्दछ.
डिजिटल बजार मा, सम्मानित र भरोसेमंद वेबसाइटहरु बाट आने वाला पछाडि लिंक को रूप मा स्वीकार गरिन्छ. तपाईँसँग जडान गरेर, तिनीहरू प्रयोगकर्ताहरू को लागी बोलेका छन् र बोट्सहरू खोजी गर्दैछन् जुन तपाइँ भन्नुहुन्छ वा के गर्दै हुनुहुन्छ. अन्य शब्दहरूमा, यी ब्याकलिङ्कहरू विश्वसनीय स्रोतहरूबाट मत बन्न र आफ्नो स्रोत प्रतिष्ठा बढाउँछन्.
यस आलेखमा, हामी व्यापार ब्याकलिङ्कको बारे सबै कुरा गर्नेछौं र किन उनी खोजी इन्जिन अनुकूलनका लागि उपयोगी छन्.
व्यवसाय ब्याकलिङ्क के हो?
प्रिय र नजिकका व्यक्तिहरु बाट सिफारिशहरु को रूप मा सबै भन्दा अधिक विश्वसनीय विज्ञापन को रूप मा रहछन, उच्च प्राधिकारी व्यवसाय बैकलिंकहरु लाई अनलाइन व्यवसाय को प्रचार को लागि उच्चतम मूल्य वाला छ।.
खोज इन्जिनहरूको आँखामा अन्य साइटहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू वोटको रूपमा सेवा गर्छन् र तपाईंको वेब स्रोतको गुणस्तरबारे बताउँछन्।. यद्यपि, खोज इन्जिनले एसईओ र PageRank एल्गोरिदममा धारणा मान्य छ.
सामान्यतया, तपाईंको साइटमा अर्को साइटबाट कुनै लिंक लिङ्क ब्याकलिङ्कको रूपमा मानिन्छ. यद्यपि, यदि यी लिङ्क स्प्यामी र कम गुणस्तरको वेब स्रोतबाट आउँछ, यसले तपाइँको साइट रेटिङलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ र तपाईंको खोजी इन्जिन अनुकूलन प्रयासहरू ध्वस्त पार्न सक्छ. यसैले तपाईले गुणस्तरको व्यवसाय ब्याकलिङ्कहरू मात्र हेर्नुपर्छ.
(1 9) कुन पक्षहरू Google द्वारा खातामा लिइन्छ?
हालैको समयमा, वेबमास्टर्सले केही व्यवसाय ब्याकलिङ्कमा एक उच्चारण गरे. बाह्य लिङ्कहरूको संख्या बढाउन तिनीहरूले फरक तरिकाहरू प्रयोग गरे. यी मध्ये केहि विधि स्पाइडी र धोखाधड़ी जस्तै लिंक खेती, निजी ब्लग नेटवर्क, स्पाम, र यति थियो.
तथापि, Google ले यो कुरा हो कि यी मध्ये केहि पछाडि बहुमूल्य र भरोसेमंद थिएन. यसैले, तिनीहरू आफ्नो रैंकिंग एल्गोरिदममा केहि संशोधन गर्न निर्णय गरे, यसको मात्रा भन्दा बरु बाह्य लिङ्कहरूको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्थे।. अन्तिम गुगल पांडा अद्यावधिक पछि, धेरै वेबसाइटहरूले आफ्नो रैंकिंग स्थिति गुमाए.
यो व्यापक रुपमा स्वीकार गरिन्छ कि खोज ईन्जिनियरिङ् धेरै अत्यधिक आवश्यक पहलुहरु को आकलन गर्दछ. यस लेखमा, हामी चार को गणना गर्दछौं कि गुणवत्ता व्यवसाय ब्याकलिंक अनुसन्धानको सन्दर्भमा. नयाँ लिङ्क निर्माण अवसरोंको खोजी गर्दा वा तपाईंको लिङ्क प्रोफाइल समीक्षा गर्न तपाईंले तिनीहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ.
(1 9) आउनुहोस् हामीलाई यीमध्ये गिनती दिनुहोस्:
प्रतिष्ठा र प्रभाव
ब्याकलिङ्कहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रतिष्ठा. यसलाई प्रभाव पार्न नजिकको छ. यही कारण छ कि जब तपाईं नयाँ लिङ्क बिल्डिङ अवसामानहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक लिङ्क जहाँ तपाइँ लिंक लिनु भएको छ, राम्रो तरिकाले ज्ञात छ र प्रयोगकर्ताहरु द्वारा अत्यधिक सराहना गर्दछ साथै साथै वास्तविक संसारमा सम्मानित हुन्छ।.
वेब पेज को सामग्री मा तपाईंको व्यवसाय संग केहि गर्न पर्छ. एसईओ एल्गोरिदमले अधिक स्थापित व्यवसायहरु लाई लिएर ल्याउने गरीब गुणस्तर वेबसाइटहरु को रोकथाम को लागी प्रासंगिकता मा विचार गर्दछ.
यो ब्याकलिङ् पक्ष जाँच गर्नको लागि, तपाइँ आफ्नो प्रतियोगिहरू हेर्न आवश्यक छ।. यदि वेब स्रोत जो तपाईंको बजार माटो को बाहिर राखिएको छ, तपाईंको सीधा विषय संग जोडिएको लिंक को उपयोग गर्दछ, यो एक अद्वितीय व्यापार बैकलिंक को रूप मा मानिन्छ.
यो सामान्यतया पर्याप्त छैन कि अन्य साइट पृष्ठ मा बैकलिंक राख्नु. यस पेजमा क्लिक गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको संख्या मात्र तपाइँको एसईओ प्रयासहरू योगदान गर्न सक्छ. यही कारण हो कि यदि केवल केहि प्रयोगकर्ताहरू तपाईको लिंकमा क्लिक गर्दछन् भने यसको प्रासंगिकता र विशिष्टता संदेहमा छ.